Pixelbook Go, komputa yakachipa yeGoogle iyo ... inoita kunge inodhura kwandiri | Linux Vakapindwa muropa
Pixelbook Go, komputa yakachipa yeGoogle iyo… inoita kunge inodhura kwandiri
Maawa mashoma apfuura, Google yakaratidza iyo Pixelbook Enda. Muchokwadi, ivo vakaburitsa tweet pamberi pehurukuro yapamutemo umo taigona kuona vhidhiyo yauinayo mushure mekucheka, kwavanoratidza kombiyuta mwenje, ine chinyararire kiibhodhi, ine dhizaini inoita kuti zvive nyore kubata uye zvimwe zvinonakidza maficha zvatino tsanangura pazasi. Asi zvinhu zvese zvinoshamisa sezvavanozvipenda here? Mune maonero angu ega uye asingachinjiki, kwete.
Tichatanga nemutengo uye isu tinotanga kunzwisisa kuti nei zvisingaite kwandiri senge sarudzo yakanakisa: isu takatarisana nekombuta ichave iine mutengo we $ 649 . zvizere "». Uye ndeyekuti iyo inoshanda sisitimu inoshandiswa nePixelbook Go ndiyo Chrome Os kubva kuGoogle, yakatemerwa kubva pakuona kwangu.
Iyo Pixelbook Go inozotengwa pamadhora mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
Inoshanda system padivi, iyo Pixelbook Go inoita kunge ine inonakidza Hardware zvikamu. Iyo 13.3 ″ skrini, iyo yave ichinzi iyo Molecular Display, iri bata uye tinogona kuzvisarudzira mune 1080p kana 4K shanduro. Pamusoro, semamwe malaptop mazhinji, ine webcam, mune iyi ye2mp chikumbiro cheGoogle.
Kana iri simba, rinowanikwa ne m3, i5 kana i7 processor. Ndangariro yayo ndeye 8GB kana 16GB maererano ne RAM uye 128GB kana 256GB yekuchengetedza. Uye kufanana nePixel yakawanda, kana isiri yese, Google Assistant inogara iripo, iyo yatinogona kukumbira nemutemo wenguva dzose nekuti mamaikorofoni anogara achishanda. Vaya venyu vari kufunga kuti izvi hazvina kutonhorera, sarudzo inogona kumiswa.
Chii chinonakidza hupenyu hwebhatiri rePixelbook Go: Maawa matanhatu ekuzvimiririra. Izvi zvakanyanya padanho remapiritsi eApple kana makomputa kupfuura mamwe malaptop ayo, mune akanakisa kesi, anogona kusvika hafu yenguva iyoyo.
Iwe unofungei nezve iyo Pixelbook Go? Iwe unofunga kuti iyi sarudzo yakanaka here kana, seni, iwe unofunga kuti inoganhurirwa ne Chrome Os?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Pixelbook Go, komputa yakachipa yeGoogle iyo… inoita kunge inodhura kwandiri
Kwete mutengo wakachipa, isina mashandiro esisitimu, ine maikorofoni akavhurika uye zvimwe pamusoro peGoogle ... zvirinani ndatoziva zvandisingazombotengi.
Ndiri kureva, kana ichifamba senge vhidhiyo ini ndinoitenga, kana isiri kupenya
Northgard: ine yekuwedzera yemahara inonzi Kukunda
Ubuntu inoburitsa chigamba chikuru kugadzirisa dambudziko mu 'Sudo'